एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय खुल्योः झाँक्री खोई ? - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय खुल्योः झाँक्री खोई ?
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय खुल्योः झाँक्री खोई ?
मासिक तीन लाख २५ हजार भाडाको श्रोत के हो ?
Sindhu Khabar शुक्रबार, २०७८ असोज १ / १४:२३
काठमाडौं । माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । पार्टी अध्यक्ष नेपालले आज बिहान मिनभवन स्थित् पूजा थापा बस्नेतको घरमा मासिक तीन लाख २५ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी पार्टी कार्यालय उदघाटन गरेका हुन् ।
घर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको पार्टी कार्यालयको भाडा व्यवस्थापन र घर धनीको नेकपा एस संगको सम्वन्ध बारे नेकपा एकीकृत समाजवादीले केहि खुलाएको छैन । १५ वटा कोठा रहेको चार तले सो घरको भाडा सार्वजनीक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको आम्दानीको श्रोत बारे बहश सुरु भईरसकेको छ ।
मीनभवनस्थित भीएस निकेतन स्कुल नजिकै खोलिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी कार्यालयको बार्दलीमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरूले मुठ्ठी उठाएर कार्यकर्तालाई हामी यहाँ छौं भनेर सन्देश दिंदा सो पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री भने अनुपस्थित् भईन् ।
गत ९ भदौमा नेकपा (एस) दर्ताका लागि सनाखत गर्न जाँदा तत्कालीन प्रस्तावित अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको हात समातेर निकै चर्चामा आएकी झाँक्री पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम मै अनुपस्थित् हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
कार्यक्रम अवधिभर कार्यालय परिसरमा नआएकी रामकुमारी झाँक्रीले कार्यकर्ताले आफू काठमाडौं बाहिर रहेकाले शुक्रवारको कार्यक्रममा उपस्थित् हुन नसकेको प्रष्टिकरण दिएकी छन् । झाँक्रीले पार्टी कामका सिलसिलामा आफ रूपन्देही भएकाले पार्टी कार्यालय उद्घाटनमा सहभागी हुन नपाएको बताएकी छन् ।